best Iforum ye-Intanethi ukususela ngo-2004
ngaphezulu ...Umphezulu ococekileyo
Bhalisela iforum yasimahla
Yenza ukhetho lwegama le-akhawunti (isizinda sakho) kwaye ugcwalise idilesi ye-imeyile. Gcina wazi ukuba iphasiwedi yakho eyintloko yomlawuli iya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile. Awusoze ufumane ugaxekile okanye intengiso kuthi. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba i-imeyile kunye nephasiwedi yakho eyintloko yomlawuli isuswe kwifolda yakho yogaxekile.
Apha ufumana iforum yasimahla ngokupheleleyo eneempawu ezininzi. Yenza i-injini yokukhangela simahla yenziwe, iforum yasimahla, ngokukhawuleza nangokulula kwimizuzu embalwa, eqinisekisiweyo simahla. Ungayitshintsha imibala, unike uluhlu, unqande abasebenzisi, wenze amaqela nokunye okuninzi. Ukuseta iforum yakho kuzenzekelayo, kwimizuzwana nje embalwa emva kokuloga kwiforum yakho isebenza ngokupheleleyo, unokuyifumana ngokukhawuleza kwaye uyilungelelanise ngokweminqweno yakho kunye nemibono. Zishenxise ubunzima nomsebenzi wofakelo lweforum kwiseva. Intloko malunga nokufikeleleka, ukugcwala kunye nokugcinwa kwezinto yinto edlulileyo kwiforum yakho.
Igama leakhawunti [A-z no-0-9]: .freeboard.at
Apha ufumana iforum yasimahla ngokupheleleyo eneempawu ezininzi. Yenza i-injini yokukhangela simahla yenziwe, iforum yasimahla, ngokukhawuleza nangokulula kwimizuzu embalwa, eqinisekisiweyo simahla. Ungayitshintsha imibala, unike uluhlu, unqande abasebenzisi, wenze amaqela nokunye okuninzi. Ukuseta iforum yakho kuzenzekelayo, kwimizuzwana nje embalwa emva kokuloga kwiforum yakho isebenza ngokupheleleyo, unokuyifumana ngokukhawuleza kwaye uyilungelelanise ngokweminqweno yakho kunye nemibono. Zishenxise ubunzima nomsebenzi wofakelo lweforum kwiseva. Intloko malunga nokufikeleleka, ukugcwala kunye nokugcinwa kwezinto yinto edlulileyo kwiforum yakho. Amagama osetyenziso oluvela kugqatso uyasebenza.